Madaxweynihii horay loo sii shaaciyay | KEYDMEDIA ONLINE
Madaxweynihii horay loo sii shaaciyay
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Hirshabeelle ee maanta lagu dhawaaqay Mudane Cali Guudlaawe horay ayaa loo sii shaaciyay inuu Hirshabeelle hoggaamin doono.
JOWHAR, Soomaaliya – Magaalada xarunta u ah dowlad goboleedka Hirshabeelle ee Jowhar waxaa maanta ka dhacday doorasho umuuqatay “Nin dooran hala doorto maxaad noo dhahdeen?” inta aan la gaarin Xilliga doorashada ayaa mar qura la waayay murashaxii malxiiska u ahaa Madaxweyne Cali Guudlaawe, hadal-heyn xoog leh ayaa la isla dhex maray taasoo ahayd in laga cabsi qabay in ay baaqato doorashadii maanta hoosta laga soo xaluuliyay Cali Guudlaawe madaxweyne ku xigeenkii hore ee Hirshabeelle oo si rasmi ah ubadalay Waare.
Qaar kamida wasiirada xukuumadda dowladda dhexe ayaa baraha bulshada kusoo qoray madaxweynaha la dooran doono inuu yahay Mudane Cali Guudlaawe, hambalyo hor-maris ah ayey hawada u marisay wasiirka Gargaarka iyo masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya Marwo Xildhibaanad Khadiija Maxamed Diiriye madaxweynaha maanta lagu dhawaaqay ee Cali Guudlaawe.
Qaar kamida Xildhibaanada markoodii hore laga soo xulay NISA ayaa sidoo kale ku qoray baraha bulshada in madaxweynaha soo socda uu noqon doono Cali Guudlaawe, si aysan ka gambasho ku jirin ayey ugu faaneen Cali Guudlaawe in uu yahay ninka mudan in la doorto, islamarkaana uu hoggaamiyo Hirshabeellada cusub.
Madaxweynaha maanta la doortay ee Cali Guudlaawe khudbaddiisii ayuu ku sheegay in aysan wadan dowladda dhexe, shaqana aysan ku lahayn magacaabistiisa, ma jirin cid weydiisay su’aasha, balse waxay u muuqatay in uu maanka ku hayay in dadka oo dhan wada ogyihiin, xulufeysina lagu keenay, Soomaaliduna waxay horay u tiri “Ninkii dhuumanaayee dhabarkiisu muuqdaa dhaqsa loo ogaadee!”
Waa lagu kala hormaray Hambalyeenta madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle, Madaxweydnaha JFS, hoggaanka madasha Xisbiyada Qaran, madaxda dowlad goboleedyada dalka, xildhibaanada iyo wasiirada Dowladda soomaaliya iyo guud ahaan bulsha weynta soomaaliyeed ayaa si isku mida ugu hambalyeeyay Madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaawe.